Global Voices teny Malagasy » Vondrona Mpianatra ao Japana Manao Izay Mampahafinaritra Ny Fanaovana Hetsi-Panoherana · Global Voices teny Malagasy » Print
Vondrona Mpianatra ao Japana Manao Izay Mampahafinaritra Ny Fanaovana Hetsi-Panoherana
Voadika ny 10 Jona 2016 5:47 GMT 1	 · Mpanoratra PRI/PRX's The World Nandika Liva Andriamanantena
Sokajy: Azia Atsinanana, Japana, Fanoherana, Mediam-bahoaka
Soratra mivandravandra avy amin'ny vondrona mpianatra SEALDs, manasongadina ireo mpikambana mpanorina, Wakako Fukuda (ankavanana). Nanova ny endriky ny mpanao fihetsiketsehana tao Japana ny SEALDS (Students Emergency Action For Liberal Democracy) na Hetsika Maika Ataon'ny Mpianatra Manohana ny Demokrasia Liberaly, ary nanao izany ho hekena tamin'ny fomba fitenenana tsotra. Sary natolotry ny SEALDs
Ity lahatsoratra avy amin'i Naomy Gingold  ity niseho voalohany tao amin'ny PRI.org  tamin'ny 27 May 2016, ary navoaka eto ho anisan'ny fifanarahana fifampizarana votoaty-.
Nandositra ny tranony i Okuda rehefa 14 taona. Kanefa tsy izany irery no trangan'ankizy nandao ny tranony ary naverina nody ka lasa tantara ny zava-drehetra.
Nandositra i Okuda ary tsy niverina .
“Te ho any amin'ny toerana farany izay lavitra indrindra an'i Fukuoka aho,” hoy izy. “Tonga tany amin'ny nosy Yaeyama aho ny farany, nosy any amin'ny farany atsimon'i Japana.”
Ny mponina: eo ho eo amin'ny 50 isa.
Nampijaliana izy tany amin'ny kolejy ary tsy niverina nankany intsony. Karazam-piainana tsy mahazatra ihany koa ny fiainam-pianakaviany . Pasitera kristianina ny rainy ary nandray ireo tsy manan-kialofana ireo ray aman-dreniny . Tamin'ny fotoana nandehanany tany amin'ny kolejy, hoy izy, ” tena hafa tanteraka tamin'ny ‘Aoka isika hanampy ny olona’ niainana tany an-trano ny tany am-pianarana. [Toy] Tsy fantatro hoe aiza ny tena tokony hisy ahy.”
Sarotra ny mahita filaminana niaraka tamin'ny olona rehetra tao an-trano. Nihomehy izy sady nanao hoe: “Fantatrareo fa adolantsento aho tamin'izany.”
Nandeha tany amin'ny sekoly kilasimandry tany ambanivohitra tsy mahazatra i Okuda tatỳ aoriana, izay nahitana ny mpianatra no mifidy ny fitsipika. Avy eo, raha vao nanomboka nianatra tamin'ny kolejy tsara tao Tokyo izy, dia nitranga tany avaratra atsinanan'i Japana ny horohoron-tany, ny tsunami sy ny vokadratsin'ny nokleary. Tamin'ny taona 2011 izany.
Nanomboka nanao asa an-tsitrapo i Okuda ary nandray anjara tamin'ny hetsi-panoherana manohitra ny nokleary.
Nolazainy fa ireo loza telo sosona ireo no teboka fiolahana.
Aki Okuda, mpikambana mpanorina ny vondrona mpianatra manao hetsika , SEALDs. Sary natolotr'i Okuda
Hoan'ny vao manomboka, nisy ny fahabangan'ny vaovao azo inoana avy amin'ny governemanta momba ny zava-mitranga. Ary nanambara ny governemanta elatra havanan'ny Praiminisitra Shinzo Abe fa hiverina hiodina indray ny milina nokleary. Avy eo nisy lalàna vaovao “tsiambaratelom-panjakana” mampangina ny mpanao gazety, izay antony iray fototra nahatonga an'i Japana nidina avy any amin'ny firenena voalohany indrindra nankany amin'ny laharana faha 72.tao amin'ny filaharan'ny Fahalalahan-gazety Manerantany taona 2016 .
“Tena tsapa fa lasa lavitra loatra ny governemanta ,” hoy i Okuda. “Maro ny zavatra tsy voalanjalanja, nahatsapa aho fa tokony hanao zavatra mba hanajanonana izany.”
Tsy miresaka politika ny ankamaroan'ny olona ao Japana raha ny mahazatra – tsy amin'ny namana na ny fianakaviana. Kanefa any Etazonia, misy ny sarin'ireo mpianatra any amin'ny kolejy toa mavitrika ara-politika na manolotena ara-tsosialy, ny mifanohitra amin'izany kosa ny ao Japana. Any amin'ny kolejy no fantatra fa hanananao fahafahana farany hanaovana fivoriana. Miditra amin'ny politika? Tsy dia tsara.
“Tena sarotra ny miteny mafy ao anivon'ny fiaraha-monina Japoney, ary nisy ny hevitra fa tsy mieritreritra politika ny olona ,” hoy i Okuda. ” Tsy miraika ny tanora.”
Nefa hoy i Okuda hoe na dia mety tsy miteny aza ny olona, dia misy ny olona izay mieritreritra politika, anisan'izany ny vondrony – SEALDs  – Students Emergency Action for a Liberal Democracy na Hetsika Maika Ataon'ny Mpianatra Manohana ny Demokrasia Liberaly.
Eo amin'ny faha 23 taonany ankehitriny i Okuda mpitarika ny iray amin'ireo hetsiky ny mpikatroka lehibe indrindra nisy hatramin'izay tao Japana .
Tamin'ny herintaona, nampiditra lalàna mba hanitarana ny herin ‘ny tafika, sy hanovana ny lalàmpanorenana mpandala filaminana ao Japana ny Praiminisitra Abe. Nanomboka nikarakara hetsi-panoherana isan-kerinandro teo anoloan'ny parlemanta ny SEALDs.
Nijery ny andininy faha-9 – ampahany tamin'ny lalàmpanorenana izay nandà ny ady sy ny tafika maharitra – ho foto-javatra maha izy azy ireo tamim-pireharehana ny ankamaroan'ny Japoney. Izay mifanohitra indrindra amin'ny volavolan-dalàn'i Abe momba ny fiarovana .
Fa any Japana, misy olana lehibe ny hetsi-panoherana. Tamin'ny taompolo 1960s sy 70s, nisy fihetsiketsehana lehibe nataon'ny mpianatra izay nivadika ho herisetra. Nisy ny olona maty. Ary mbola tsaroana foana ny endriky ny mpanao fihetsiketsehana ho ekstremista mahery setra.
Noho izany nahalala i Okuda sy ny SEALDs fa mila ovaina ny kolontsaina, ary mampiseho izany ho toy ny olona tsotra rehetra afaka sy tokony handray anjara amin'ny hetsika.
Nanomboka tamin'ny fiantranoana ara-pampianarana ry zareo. Ary namoaka dokambarotra mandeha misosa sy manaitra maso ary trakitra mampiseho azy ireo manokana: mihaja, mpianatry ny kolejy mahazatra. Okuda, izay malaza amin'ny hip-hop, nilaza hoe tsy misy antony hanaovana trakitra hanaovana hetsi-panoherana sy politika tsy atao amin'ny endrika tsara toy ny trakitra amin'ny fampisehoana lanonana amin'ny mozika izay azony tsy tapaka.
Tamin'ny voalohany, vitsy ny mpanao fihetsiketsehana, fa ny tapaky ny volana Jolay sy Aogositra, nahatratra 60.000, avy eo 120.000 ny isan'ny olona.
Mety manome kabary mandresy lahatra ny mpikambana ao amin'ny SEALDs. Nanomboka nanao izany koa ireo Akademika sy ny mpanao politika malaza. Ary mety nitarika izany hiakan'ny antso-sy-valiny tsy misy farany izany ny SEALDs, mitaky ny fanonganana ny Praiminisitra Abe amin'ny fomba tsy ofisialy, ny famaranana ny ady ary ny fiarovana ny lalàmpanorenana sy ny ankizy.
Nipongapongatra manerana an'i Japana ny vondrona SEALDs . Ary nisy ny vondrona naka aingam-panahy avy amin'ny SEALDs.
Misy tsikera milaza fa misehoseho amin'ny endrika rehetra ny SEALDs. Fa hoy i Aki Okuda hoe midika izany fa efa nahomby ny fanovana ny endriky ny mpanao hetsi-panoherana . Sary natolotry: SEALDs
Nanadihady momba ny SEALDs hatramin'ny nisehoany voalohany teo amin'ny sehatra i David Slater, ilay anthropolojista ara-kolontsaina. Hoy izy hoe tohina ireo taranaka lehibe kokoa ao Japana – ary nahazo aingam-panahy.
“Mandeha izy ireo oay, ireo no olona izay mangirifiry ankehitriny satria ireo taranaka indray mihira amiko tsy nanao na inona na inona nandritra ny taompolo 1980s sy 90s, ary ankehitriny izy ireo manana ny herim-po hanandra-peo, na dia mety hampidi-doza ny tenany aza izany,” hoy i Slater.
Nasaina hiteny tao amin'ny Diet, parlemanta Japoney, i Okuda. Nefa tamin'ny farany, taorian'ny ady hita vatana, vao maika nanao kopy soroka nampiditra ny volavolan-dalàna momba ny tafika hatramin'ny farany i Abe.
Nitodika ho amin'ny fifidianana 2016 ny SEALDs, nifantoka tamin'ny fanilihana ny fifidianana ny manampahefana mpanao politika amin'izao fotoana. Vao haingana, nanampy tamin'ny fihaonan'ireo antoko mpanohitra miaraka izy ireo. Misy ny antoko politika vaovao ao Japana amin'izao fotoana izao. Ary nanao fanentanana lehibe amin'ny hoe mivoaha hifidy.
Fa amin'izany rehetra izany, nisy ny tsikera ho an'ny SEALDs fa tsy matotra loatra ry zareo, fa mifantoka amin'ny fisehosehoana amin'ny endrika ivelany.
Nihomehy i Okuda rehefa nahare izany : “Izany no tetikadinay,” hoy izy, hanova ny endriky ny hetsi- panoherana sy ny mpanao fihetsiketsehana. “Noho izany midika ny filazan'ny olona fa nandaitra ilay izy.
Ny hamorona hatrany ny kolontsaina iray ao Japana no ‘tanjona lehibe kokoa ho an'ny SEALDS hoy izy izay mety amin'ny rehetra mba ilazana fotsiny ny heviny sy iresahana politika ankalalahana, miaraka amin'ny mpiara-miasa, ny namana sy ny fianakaviana, eny andalambe – mba hamoronana fenitra vaovao.
Nilaza ny Slater fa ho takatra feno ny herim-panintonan'ny SEALDs, toy ny hetsika ara-tsosialy lehibe rehetra, taona maromaro any aoriana any. Nefa efa misokatra bebe kokoa amin'ny politika ny olona. Nolazainy fa efa voaentana kokoa momba ny raharaha sy ny mety ho fandraisana anjarany ny mpianany.
Lasa toy ny kintan'ny rock ao Japana amin'ny ankapobeny ny SEALDs — sy Okuda, indrindra indrindra —. Nanao antsafa maro isan'andro i Okuda, ary niteny tany amin'ny lanonana isankarazany. Misy ny votoaty fanadihadiana vao nivoaka. Eo am-panoratana boky roa ihany koa izy, ny anankiray nataony manokana, ny iray niarahany tamin'ny mpikambana hafa tao amin'ny SEALDs. Manana mpanjohy  28.900 i Okuda ao amin'ny Twitter .
Hita eo amin'ny fonon'ny gazety lamaody sy kolontsaina Japoney ihany koa ny mpikambana ao amin'ny SEALDs. Tany am-piandohan'ity taona ity, niseho niaraka tamin'ny Rolling Stone i Okuda sy ny iray amin'ireo vehivavy malaza maro ao anatin'ny SEALDs . Ary noho ny fifidianana atsy ho atsy, efa miara-miasa amin'ny marika lamaody malaza ny SEALDs; Nipongatra ao amin'ny iray amin'ireo departemantam-pivarotana malaza indrindra ao Tokyo ny tsipika “Don’t Trash Your Vote ” na “Aza ariariam-poana ny latsa-batonao ” ijoroan'izy ireo.
Na dia eo aza izany rehetra izany, mikasa ny hisaraka ny SEALDs aorian'ny fifidianana amin'ny volana Jolay hoy i Okuda. Okuda, izay any amin'ny oniversite ankehitriny , nilaza fa vondron'olontsotra hatrany izy ireo ary mahafantatra ny tohin'ny zavatra tiany hatao ny tsirairay .
Na inona na inona mitranga, dia mazava fa nisy zavatra niova tao Japana. Ary mino ny vondrona fa miditra mankany amin'ny làlana ireo izay tsy miraika indrindra .
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2016/06/10/83677/
 Naomy Gingold: http://www.pri.org/people/naomi-gingold
 niseho voalohany tao amin'ny PRI.org: http://www.pri.org/stories/2016-05-27/student-group-japan-thats-made-it-cool-protest
 filaharan'ny Fahalalahan-gazety Manerantany taona 2016: https://rsf.org/en/ranking
 Don’t Trash Your Vote: https://twitter.com/DTYV_2016